Agaasimihii guud ee Wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland oo Is-casilay, fashiliyeyna siro culus iyo musuq uu Wasiirku ku kacay | Berberanews.com
Home WARARKA Agaasimihii guud ee Wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland oo Is-casilay, fashiliyeyna siro culus...
Agaasimihii guud ee Wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland oo Is-casilay, fashiliyeyna siro culus iyo musuq uu Wasiirku ku kacay
Hargeysa-(Berberanews)- Agaasimihii guud ee Wasaaradda arrimaha dibedda Jamhuuriyadda Somaliland Somaliland Maxamud Raage Ibraahin, ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu Wasaaraddaa ka hayey, isla markaana waxa uu fashiliyey xogo musuqmaasuq iyo Xafiisyo xidhmay oo uu ku kacay Wasiirka arrimaha dibedda Maxamed Cabdillaahi Cumar.
Agaasimaha is-casilay waxa uu eedayn ba’an u jeediyey Wasiirrada Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Arrimaha dibedda Maxamed Cabdillaahi Cumar, kuwaasoo uu ku eedeeyey inay Ururro siyaasadeed oo u gaar ah si qarsoodiya Hantida Qaranka ugu furteen. Waxaanu Agaasimihii hore ee arrimaha dibeddu sidaa ku sheegay shir jaraa’id oo uu galabta ku qabtay xafiiskiisa Hargeysa. “Maanta oo ay bishu tahay 13 February waxay igu kalliftay in aan ka tago shaqadii Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland, waxay ku fiicnayd oo ay ku karaamo badnayd in aanan warbaahinta ka sheegeen ee aan is toos ah ugu gudbiyo Madaxweynaha Somaliland oo aan idhaahdo Madaxweyne shaqadii aad ii igmatay waan ka tagaayaa.” Sidaa ayuu yidhi Agaasimihii guud ee Wasaaradda Arrimaha dibedda Somaliland Maxamuud Raage oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa magaalada Hargeysa.
Agaasimihii hore ee Wasaaradda arrimaha dibedda oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray; “Laakiin, waxa suurto-gali wayday in Madaxweynaha Somaliland oo runti ah nin taariikh siyaasiya oo qoto dheer leh nin qiimo badan nin illaa maalinti uu xukunka soo galay Agaasime waaxeed ka soo bilaabay illaa Wasiir Soomaaliya illaa Wasiir Somaliland ah oo yaqaan nidaamka maamulka, waxa suurto-geli wayday in Madaxweynaha la ii oggolaado in la siiyo warbixinta dhabta ah, taaso ka turjumaysa Somaliland, haday noqoto mid Wasaaraddan ah iyo haddii ay noqot mid caam ah.”
“Madaxweynaha waxa laga qariya oo loo saamixi-waaya inuu helo xaqiiqda dhabta ah, taasina waxay noqotay in aan daah-furo oo aan sababeeyo ama caddeeyo si aanay u sii socon oo siyaabo badan ayaa wax loo daweeya. Waxa ugu fiican ee maamul lagu daaweeya waa in maamulka gudihiisa wax laga saxo, waxa wax lagu daaweeya in la doodo in la wadahadlo oo wax la isku sheego gudahayga. Haddii maamulka gudaha la hagrado oo madaxda qaarkood loo diido inay runta sheegaan, waxa imanaya in ragga qaarkii shaqada ka baxaan oo ay bannaanka ka saxaan.” ayuu yidhi Maxamuud Raage Ibraahin.
Agaasimihii hore ee Wasaaradda arrimaha dibedda Maxamuud Raage oo maanta ku dhawaaqay iscasilaadiisa, waxa uu yidhi; “Ujeeddo Madaxweyne sida aad la socoto waxaan Wasaaradda joogay muddo toddoba bilooda, aniga oo ka soo shaqeeyey Wasaaradda Caddaaladda muddo toban bilooda. Hadda waxa idiin dhisan guryo cusub oo Guddiga Caddaaadda leeyihiin iyo dib u habayn caddaalada ka dhacday iyo shirkii saddexda cisho socday ee caddaalada Somaliland lagu saxayey inaan ahay ninkii gardaadinayey.”
“Madexweyn waxay qabyo wayni ka muuqata xidhiidhka ka dhexeeya Wasaaradda iyo laamaha dibadda, kuwaasi oo aan u hawlgalin sidii loogu talo-galay. Waxaan socdaalku tagay waddammo badan oo Afrika iyo Yurub ah waxay ku cawdeen wada-shaqayn la’aan Wasaaradda arrimaha dibedda iyo xafiisyada dibedda ka dhex taagan. Madaxweyne waxa adkaatay xidhiidhkii iyo wada-shaqaynta ka dhaxeeyey madaxda wasaaradda, tusaale ahaan Wasiirka iyo Wasiiru-duwlaha iyo Agaasimaha guud, waxa suurto-gali wayday haba-yaraate in saddexda masuul ee Wasaaraddu ay shir-yeeshaan muddada todobada bilood ee aan xilka hayay maannaan kulmin masuuliyiinta.”
“Waxay arrintaasi mushaakil ku noqotay Wasiirka Wasaaradda oo raacay nidaamkii hore u jir jiray ee ahaa inuu Wasiirku u shaqeeyo oo aanu la shaqayn golayaasha, aqoonyahannada, Safaaradaha iyo dhammaan shaqaalaha Wasaaradda. Waxa kale oo mushaakil noqotay isticmaalka miisaniyadda oo uu masuul ka ahaa Agaasimaha guud, laakiin aan wax masuuliyad ah looga dhiibin. Sidaa daraaddeed, waxaan go’aansaday inaan shaqada ka tago oo aan maanta ku dhawaaqo inaan iska casilay xilkii Agaasimaha guud ee Wasaaradda arrimaha dibedda ee aad ii igmatay Madaxweyne.” Sidaa ayuu yidhi Agaasimihii guud ee Wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland Maxamuud Raage Ibraahin.
“Arrinta ugu layaabka badan ee igu kalliftay in aan si qaawan maanta wax kuugu sheego ee igu kallifay in aad xaqiiq ku noolaato si aad qarankan u hagto aniga oo adiga kuu hiilinaya oo xaqa kuugu hiilinaya, Mudane Madaxweyne waxa uu Wasiirku nagu amray in aannu siino kharashkii lagu furayay Xafiisyada Koonfurta Sudan oo uu kharashkaasi ahaa 64,000 oo Doollar una habaysan hab maamul Madaxweyne waxaan sugayay muddo laga joogo afar bilood in Xafiis la furo, habayaraate maanta oo aan kula hadloyo Xafiiskii koonfurta Sudan illaa hadda ma furna. Ilo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Xisbiyada qaar ka mid ah lagu furay, maaddaama oo ay tahay arrimo kale halkaa taas u dhaafi maayo.” ayuu yidhi Maxamuud Raage.
Waxaanu intaa ku sii daray Maxamuud Raage oo uu yidhi; “Madaxweyne waxa xidhmay intii uu Wasiirku halkan joogay safaaradihii Pakistan, Sweden, Denmark, Koonfur Afrika illaa miisanayaddoodu waxay ku jirtay miisaniyaddii 2011-kii, sidu kharaashkaasi u baxay waxa lagu heli karaa si fudud oo aad uga soo qaadan kartaa Baniga Somaliland. Kharaashaadka loogu talo-galay in lagu kharash gareeyo Safaaradaha waxa loo wareejiyey sanduuq xisaabeed (account number) ayaa lagu wareejiyey iyadoo safarro lagula baxayo. Waxa weeye 498 waxa kaliya oo saxeexa oo lacagta bixiya Wasiirka arrimaha dibedda iyo Agaasimaha maamulka.”
Previous articleMadaxweynaha Soomaaliya oo Al-Shabaab ku Tilmaamay gumaystayaal
Next articleA New Deputy Commander for Somaliland National Defense Army-Appointed by the President